Ekipa fanontana | Fitsangatsanganana tanteraka
Absolut Viajes dia tranokala Blog Actualidad. Natokana ho an'ny tranonkalantsika tontolon'ny fitsangatsanganana ary ao no arosonay ny toerana nitodiana tany am-boalohany raha mbola mikasa ny hanome ny fampahalalana sy ny toro-hevitra rehetra momba ny fitsangatsanganana, ny kolontsaina samihafa eto amin'izao tontolo izao ary ny tolotra tsara indrindra sy ny mpitari-dalana mpizahatany.
Ny ekipa fanontana ao amin'ny Absolut Viajes dia misy mpandehandeha be mpitia sy mpiorina amin'ny karazany isan-karazany faly mizara ny zavatra niainany sy ny fahalalany taminao. Raha te ho anisan'izany ianao dia aza misalasala manorata anay amin'ny alalan'ity taratasy ity.
Hatramin'ny naha kely ahy dia nazava aho fa ny mpampianatra dia tokony ho zavatra. Ny fiteny no heriko hatrizay, satria ny iray amin'ireo nofinofy lehibe dia ny, dia ny fitetezana izao tontolo izao. Satria noho ny fahalalana ny faritra samihafa amin'ny planeta, dia mahavita mianatra bebe kokoa momba ny fomba amam-panao, ny olona ary ny tenantsika isika. Ny fampiasam-bola amin'ny fitsangatsanganana dia manararaotra ny fotoanantsika!
Manana traikefa matihanina mihoatra ny 20 taona eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany aho, ireo izay namaky boky sy nitsidika toerana tsy nampino eran'izao tontolo izao.
Diplaoma amin'ny filôzôfia espaniola avy amin'ny Oniversiten'i Oviedo. Mientanentana amin'ny fitsangatsanganana sy amin'ny fanoratana momba ireo traikefa nahafinaritra entin'izy ireo taminay. Izany rehetra izany mba hizarana azy ireo ary samy manana ny fampahalalana mifandraika amin'ny toerana tsara tarehy indrindra eto an-tany. Ka rehefa mitsidika azy ireo ianao dia hanana torolàlana feno momba izay tsy azonao adino.
Tiako ny mandeha, mahalala toerana hafa, miaraka amin'ny fakantsary tsara sy kahie tsara foana. Liana indrindra amin'ny fanaovana dia amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teti-bola betsaka indrindra, ary ny fitsitsiana raha azo atao.
Fony mbola kely aho dia nanapa-kevitra ny ho mpanao gazety, ny fitsangatsanganana fotsiny no nahitako ny endrika, fomba amam-panao, kolontsaina, mozika samy hafa. Tamin'ny fandehan'ny fotoana dia nahatratra ny antsasaky ny nofinofiko aho, hanoratra momba ny dia. Ary io famakiana io, ary raha ny fahitako azy, inona ny toerana hafa dia fomba iray misy.